Siyaasi CCW oo sheegay in DF Somaliya ay Xasan Daahir u oggolaatay in uu ku baaqo Dilkiisa! (Maxaa ka jira?) | HalQaran.com
Siyaasi CCW oo sheegay in DF Somaliya ay Xasan Daahir u oggolaatay in uu ku baaqo Dilkiisa! (Maxaa ka jira?)
Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame
Muqdisho (Halqaran.com) – Siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa sheegay in Dowladda Soomaaliya ay bilowday qorshe lagu khaarijinaayo xubnaha Mucaaradka ku ah Dowladda, iyadoo la adeegsanayo xubno argagaxiso ahaa jirey.
Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu ku sheegay in Xasan Daahir ay dowladda u ogolaatay in uu ku baaqo dilkiisa iyada oo taageerayaasha dowladduna si la mid ah baaqaas baraha bulshada ka wadaan sida uu hadalka u dhigay.
“Dowladda Soomaaliya waxaa ay Xasan Daahir Aweys oo ah argagixiye dilay kumanaan qof u ogolaatay in uu ku baaqo dilkeyga, iyada ayaana ku taageereysa, taageerayaasheeda ayaa sidoo kale hadalkaas ku haya baraha bulshada, sow macadda in ay wada shaqeeyaan argagixisada iyo dowladda?” ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
dowladda waxay diyaarisay qorshe laygu khaarijinayo